प्रहरीसँग भिडन्त नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष,विप्लवद्वारा हत्याको बदला लिइ छाड्ने प्रण, - City Post Daily
प्रहरीसँग भिडन्त नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष,विप्लवद्वारा हत्याको बदला लिइ छाड्ने प्रण,
June 26, 2019 मुख्य खबर / राजनीति
काठमाण्डौ, ११ असार । कुमार पौडेलको हत्यारालाई बदला लिइ छाड्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रण गरेका छन् । पौडेल हत्याको विरोधमा आयोजित नेपालबन्द सकिएपछि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट जारी प्रेस विज्ञेप्तीमा विप्लवले राष्टवादी, देशभक्त शक्तिहरुसँग मिलेर यो देशका दलालहरुलाई निस्तेज पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।नेपाल बन्दको दिन बेलुका प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लवले बन्द सफल बनाउने देशभक्त, वामपन्थी शक्ति, क्रान्तिकारी शक्ति, प्रगतिशील पक्ष, पार्टी पङ्क्ति र जनता सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै विप्लवले आफ्नो पार्टीप्रति जनलहर बढिरहेका कारण अत्तालिएको सरकार क्रान्तिकारी पार्टीमाथि दमनमा उत्रिएको बताएका छन् ।साथै वली सरकारले राष्ट्रघात र जनघातमा यस अघिका सरकारलाई पनि उछिनेको छ भन्दै विप्लवले आफ्नो पार्टीले आयोजना गरेको नेपाल बन्द सफल बनाउन सहयोग गर्ने देशभक्त, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी शक्ति, जनता र आम पार्टी पङ्क्तिलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्लाहीमा नेत्र विक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको भिडन्तमा नमारिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । आयोग सदस्य सुदीप पाठक नेतृत्वमा सर्लाही गएको टोलीले सर्लाहीमा दोहोरो भिडन्त पुष्टि गर्न नसकिएको बताएको हो ।
यसैगरी सत्ताधारी नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कुमार पौडेल मुडभेडमा मारिएको भन्ने समाचार सत्य नभएको भन्दैं त्यहाँ उनको हत्या नै भएको बताएका छन् ।पौडेलको हत्यारालाई कार्वाही गर्नुपर्छ भन्दैं पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले दोषीलाई कार्वाही नगरे देशमा दण्डहिनता बढेर जाने बताए । संसदीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै नेता शर्माले गृहमन्त्री र प्रहरी आइजीपी दुबैलाई गल्तीको ढाकछोप नगर्न चुनौती समेत दिए ।जनार्दन शर्माले बैठकमा बोलेको भनाईको सानो अंश –अब फेरीपनि हामी द्वन्द्वतिर होइन, शान्तितिर नै जानुपर्छ । राजनीतिक रुपले अर्को द्वन्द्वको सुरुवात हुनु हुदैन । संविधानले सबै ब्यवस्था गरिसक्दा पनि मुलुक फेरी द्वन्द्वको बाटोमा अघि बढनु हुँदैन । हामीसँग संविधान छ । यसको सरकार र हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या भनेकै संबिधानको कार्यान्वन नगर्नु नै हो । सबै पक्षले इमान्दारिता पूर्वक संविधानको कार्यान्वन गर्नु नै ठूलो कुरा हो । हामीसँग संविधान भएपछि त्यसलाई नमान्ने समूहलाई संविधान अनुसार नै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । अहिले झन् हामीले विप्लव समूहलाई थप प्रतिबन्ध लगायौँ । प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक थियो कि थिएन ? मेरो विचारमा थिएन भन्ने हो । किनभने कानुनले अधिकार दिएकै थियो हामीलाई । त्यस्तो गतिबिधी गरेपछि, हतियार बोकेपछि त्यसलाई समात्ने अधिकार त अघिपछि पनि छँदै थियो ।तर अहिले आएर घटनाहरु जसरी भइरहेका छन, गृहमन्त्रीको जसरी रिर्पोट सुनियो । गृहमन्त्रीले तलबाट जे आयो त्यही नै प्रस्तुत गर्नुभयो म जान्दछु । तर कुरा के हो भने आजको दुनियाँ डिजिटलमा छ । आजको जनता धेरै सेचत भइसकेको अवस्थामा तथ्यहरुलाई बङग्याएर हैन, तथ्यहरु गल्ति भएको सच्याएर जानुपर्छ । त्यसले मात्रै शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउँछ ।अहिले प्रहरीमा अनुसन्धानमा, साधन स्रोतमा कमजोरी हैन, सबै जानकारी थाहा होला । आईजीसाबलाई कहाँ के गतिबिधी भइरहेको छ तुरुन्तै सुचना आउछ अहिले ? सबै उपकरण छ, को कहाँ बस्छ सबै थाहा हुन्छ । थोरै थाहा नहुने, जानकारी नहुने कुरा हो र ? प्रविधिले जानकारी गराँउछ त्यो समस्या हैन ।प्रहरीले घटनालाई मुठभेड भनेर रिर्पोट दिएको छ तर जनताको पनि रिर्पोट छ । तथ्य छ, फोटाहरु छन, त्यो फोटो त प्रहरीले दिएको हो । को थियो र त्यहाँ मुठभेडमा ? प्रहरीले दिएकै फोटो हेर्यो भने पाँच छ ठाँउ त हातै भाँचिएको देखिन्छ । पहिला हात खुट्टा भाँचेर गोली हानेको अवस्था कसरी मुठभेड हुन सक्छ ? कि गोली हानेपछि भाँचियो त हातखुट्टा ? त्यसो त हैन । त्यसकारण यस्तो घटनाले बिद्रोह र जनतामा असन्तुष्टि आउँछ ।
यस्तै ः नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका चार नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । सो समूहका राप्ती ब्युरो सदस्य गोर्खबहादुर कामीसहित चार जना नेता कार्यकर्ता गएराति पक्राउ परेका हुन् । त्रिवेणि गाउँपालिका–१ सिन्तुवाङबाट आठबीसकोटका कामीसहित दीर्घराज गहतराज, छविलाल घर्ती र युवा सङ्गठनका जिल्ला उपाध्यक्ष विवेक बिक पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिए ।
विप्लव छिट्टै मूलधारको राजनीतिमा फर्किने प्रचण्डको दावी
घुससहित कार्यलय प्रमुख पक्राउ